Akụkọ Samir Sampat na Martech Zone |
Edemede site na Samir Sampat
Oge bụ ihe niile na azụmahịa. Ọ nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti onye ahịa ọhụrụ nwere ike ịkwụ ụgwọ yana kwụgidere ya. A naghị atụ anya na ị ga-eru n'isi ahịa na mbọ oku izizi gị. Ọ nwere ike were nwaa ole na ole dịka nyocha ụfọdụ na-egosi na ọ nwere ike were oku ruru 18 tupu irute ụzọ na ekwentị nke mbụ. N'ezie, nke a dabere na ọtụtụ mgbanwe na ọnọdụ, ma ọ bụ otu